အစား.. အသောက်… | Layma's World
« တွေ့ ဆုံ အကြွေးပေးခန်း သူမရဲ့ … »
သားကြွက်, on October 28, 2008 at 4:13 pm said:
အလွမ်းဓာတ်ခံ ရှိပါတယ်ဆို ပိုဆိုးသွားပြီး ကျောင်းကအကြောင်းတွေ ရေးရလွန်းလို့ လည်း ကိုယ့်အကြောင်းတွေ ပေါ်လှပြီး မျက်မှန်ကလည်း သူ့ မကောင်းကြောင်းတွေဘလော့ဆိုတာကြီးပေါ်မှာရေးနေမှန်းသိလို့ ကတော့ ဘယ်လောက်စိတ်တိုနေမလဲမသိ 🙂
MhawSayar, on October 28, 2008 at 9:52 pm said:
ဖတ်ရတာ လွမ်းစရာကြီးဗျာ. ကော်ဖီမစ်၊ ယမ်ယမ်၊ နေခြည် (မန်းလေးက ထုတ်တဲ့ သနပ်ဖက် ဆေးလိပ်.. အစီခံ ရောက်သည်အထိ ဟိုထိုး၊ ဒီထိုးနဲ့ စီနီယာတွေ မတွေ့အောင် ဖွက်ပြီး အတန်းဖြုတ်တဲ့ အချိန်Toilet တွေဘက် သွားပြီး အနံ့ပေါင်းစုံ ရှုရင်း ၃၊ ၄ ယောက် မျှပြီး ခိုးသောက် ခဲ့ကြတာ၊ အခု သူနဲ့ အဆက်အသွယ် ဖြတ်လိုက်ပြီးပေမယ့် ဒီပို့စ် ဖတ်ပြီး ပြန်သတိရသွားတယ်). ယမ်ယမ်ကတော့ ညဘက် မီးပိတ်ချိန်လို့ အော်သံကြားပြီးတာနဲ့ ကိုယ်ဘေးနားက ဘော်ဒါနဲ့ “ဂေါက်” လို့ခေါ်တဲ့ ရေကို ရှော့ရိုက်ပြီး အမြန်ဆူအောင် လုပ်တဲ့ လျပ်စစ်ပစ္စည်း (သူကလည်း အလုံခြုံဆုံး ဖြစ်အောင် ဖွက်ထားရတယ်) နဲ့ရေနွေးတည်၊ ပြီးတာနဲ့ ယမ်ယမ် ရေချိုးတဲ့ ပလတ်စတစ် ခွက်ထဲကိုထည့်ပြီး ကုတင်ကြားထဲ ပူတာ၊ အေးတာ၊ ကျက်တာ၊ မကျက်တာတွေ မသိပဲ အမြန်မျိုချ. တယ်အရသာ ရှိခဲ့တယ်ဗျာ…
(အခုတော့လည်း ခေါက်ဆွဲခြောက်တွေ ပြုတ်ပြုတ်ပြီး မစားဖြစ်လို့ အေးခဲ၊ သွန်ပစ်လိုက်ရတဲ့ အကြိမ်တွေ မနည်းတော့ဘူးဗျ.. 😛 )
THS, on October 28, 2008 at 11:48 pm said:
အပေါ်ကအကိုကြီးပြောသွားတဲ့အတိုင်းပဲ သူပြောသွားတာတွေကို သွားသတိရတယ် 🙂
အဲ…အစ်မက ၀ိုင်သောက်ပြီး မမူးခင် အမြန်အိပ်လိုက်တော့ မူးတဲ့အရသာကို မသိတော့ဘူးပေါ့ 😛
ညိမ်းညို, on October 29, 2008 at 4:55 am said:
ညီလေးဘိုတင့် 😛 ပြောသွားသလိုပဲဗျ
အနော်တို့က ဘ၀တူတွေကိုးခင်ဗျ 😀
လွမ်းလို့ ပြန်ဖြစ်ချင်လားဆိုရင်တော့ အဟဲ ကြောက်…ကြောက်
ပုံရိပ်, on October 29, 2008 at 9:19 am said:
လွမ်းစရာပဲ မလေးမရယ်။ မလေးမအစား လွမ်းတောင် လာပြီ။
မွန်, on October 30, 2008 at 1:05 pm said:
ခေါက်ဆွဲပြုတ်ပန်းကန်ကြီးရှေ့ချပြီး ငူငူကြီးထိုင်နေတတ်တယ် အဲဒါလေးဖတ်ပြီး တမျိုးပဲ ခံစားလိုက်ရတယ် တခါတလေလဲ ဘဝမှာ ဘာမှမဆုံးရှုံးရသေးသလိုနဲ့ အမှတ်တမဲ့ပျောက်သွားတာတွေ အများကြီး ပျောက်မှန်းသတိမထားခင်တုန်းကတော့ နေသာသလို အဲဒီအရေးမပါတာလေးတွေ ပျောက်မှန်းသိသွားတော့ ရင်ထဲမှာ ပြောမပြတတ်အောင် ဟာတာတာကြီး အင်မတန်စိတ်ဓာတ်ထက်သန်ပြင်းရှပြီး အင်မတန်စိတ်ပျော့စိတ်လွယ်သော စာရေးသူလို့ အရင်က မမကိုမွန်ဝေဖန်ခဲ့တာ အခုဒီစာဖတ်ပြီး အဲဒါကို တခါထပ်ပြောမယ်
ယောင်းမ, on October 30, 2008 at 7:08 pm said:
ရှာလို့တွေ့ပြီ။ link to the past ဘာမတူသလဲ ဆိုတာ။ ခု သိပြီ။
နောက်ထပ် link တွေ ချိတ်ပါဦးဟာ။ ဖတ်ရတာ မဝဘူး။
အပေါ်မှာ “ မွန် ” ရေးသွားသလိုပဲ နာ့စိတ်ထဲမှာလည်း ….ယောင်းမရယ် ။
ဝေလေး, on October 31, 2008 at 1:18 pm said:
မမတို့ကျောင်းတတ်တုန်းကပျော်စရာကြီးနော်။ လုစားရတဲ့အစားအသောက်တွေကိုတော့ လွမ်းသားပဲ။ အတန်းထဲမှာပဲ မုန့်စုစားတာ နည်းနည်းလေးဆိုတော့ လုစားကြရတာ..
chaos, on November 2, 2008 at 4:06 pm said:
ကျောင်းတုန်းက အချိန်တွေကို ပြန်တမ်းတတိုင်း စာကျက်ချိန်ကို ခဏအတိတ်မေ့ထားတယ်။ စာတွေတော့ ပြန်လုပ်ရတာ ပျင်းလယ်။
SoeMoe, on November 2, 2008 at 9:35 pm said:
စိုးမိုးတို့ လည်းအခုထိလုစားကြတုံးဘဲ.. 😛
nu-san, on November 6, 2008 at 11:12 am said:
လေးမရေးထားတာ ဖတ်ပြီး အရင်တုန်းက သူငယ်ချင်းတွေနဲ့ အတူသွား အတူစားခဲ့တာ တွေ သတိရမိတယ်.. အဆောင်မနေဖူးတော့ အဆောင်ကျောင်းသူဘ၀ကို မရဖူးလိုက်ဘူး.. အမက အဆောင်မှာ နေရင်း ကျောင်းတက်ချင်တာ.. ကျောင်းကိုလွမ်းသွားပြီ ညီမလေးရေ..
အော်.. ၀ိုင်သောက်တဲ့နေရာလေးဖတ်ပြီး အမနဲ့ တူတယ်ဆိုလို့ သတိရမိသေးတယ်.. အဟဲ.. အမကတော့ အရမ်းရစ်တာ.. 😛